नवजात शिशुका दश लक्षणहरू जुन आमाबाबुलाई असाधारण लाग्छ (तर साधारण हुन्छन्)
१. रातो दागहरू
मेडिकल सब्दमा एरिथेमा टॉक्सिकम भनिन्छ (एरिथेमाको अर्थ रातो हो) यद्यपि नाममा विषाक्त पदार्थ समावेश छ, यो मिसनोमर हो। एरिथेमा टॉक्सिकममा विषाक्त र हानिकारक कुनै कुरो छैन । यो दाग आधा नवजात शिशुमा जन्मको २- ५ दिन भित्र मा सुरू हुन्छ अनि छाती, ढांर, पेट र कहिले काहीँ अनुहारमा देखा पर्दछ। यो रातो दाग माथि सेतो वा पहेंलो थोप्ले हुन्छ। यो धेरै अभिभावकहरूको लागि चिन्ताको कारण हुन्छ, तर यो हानिरहित हो र बच्चालाई खुजली पनि गर्दैन। यो सामान्यतया २ हप्ता भित्रमा आफई गायब हुन्छ, यद्यपि कहिलेकाँही यो १ महिनासम्म रहन्छ। कुनै उपचार आवश्यक हुँदैन। धेरै आमा बुबा क्रीम वा पाउडर लगौंछन, जसले संक्रमण पैदा गर्न सक्छ।
अपेक्षित देखि २ हप्ता भन्दा ढिला वा सही समयमा तर २ किलोभन्दा कम तौलमा जन्मेका बच्चाहरूमा, छाला स्वचालित रूपमा खुलिन्छ। तेल मालिश गर्दा यो कम हुन्छ। यद्यपि यो पनि सामान्य हो।
३.नाकमा सेतो थोप्ले
चिकित्सकीय सब्दमा मिलिआ भनिन्छ -सानो सेतो थोप्ला नाकमा, मुखको वरिपरि र कहिलेकाहीं ठोडीमा पनि देखा पर्न सक्छन। कुनै उपचार आवश्यक छैन र यो केहि हप्ता वा महिना भित्र गायब हुन्छ।
४.मुखको तालुमा सेतो थोप्लो
मेडिकल सब्दमा एपस्टीन पर्ल्स भनिन्छ - केही बच्चाहरूको तलवामा सानो सेतो थोप्ले हुन्छ, यो सामान्य हो। केहि गर्न आवश्यक छैन।
५.पहिलो हप्तामा वजन घट्नु
यो अपेक्षित हो (र वजन नघट्नु समस्या हो)। समयपूर्व जन्मेका शिशुहरूमा (जसलाई प्रिटेर्म भनिन्छ) अझ बढि वजन कम हुन्छ। यो चिन्ताजनक तब मात्रै हुन्छ जब वजन १०% भन्दा बढि कम हुन्छ र जन्मेकों १० दिन पछि पनि वजन बढ्न सुरू हुँदैन
६. घरी घरी मल आउनु
बच्चाहरू पहिलो केही दिनमा कालो वा हरियो टट्टी गर्न सक्छन्। यो धेरै पटक आउंछ (यसलाई ट्रांसिटीओनल मल भनिन्छ)। यदि यो अर्ध ठोस छ र पानी जस्तो छैन भने, यो पखाला होईन र यो सामान्य हो।
७. दूध थुकनू अथवा उल्टी गर्नु
शिशुहरु दूध पिए पछि तुरुन्तै थुक्छन् वा उल्टी गर्न सक्छन्। यो सामान्य छ, जबसम्म बच्चाको वजन बढ्दै गइरहेको छ र दिनमा ६ देखि ८ पटक पिसाब गर्दै छ। बच्चा बढ्दै जाँदा थुक्न कम हुन्छ, सामान्यतया ६ देखि ९ महिनाको उमेरमा। दूध पिलाये पछि १० मिनेट सम्म पछाडि ठप्पा द्वारा थुक्न कम गर्न सकिन्छ। यदि बान्ता पहेलो छ, रगत लागेको छ, बच्चाले असामान्य आसन बनाउँदछ वा बान्ता पछि पर्याप्त तौल प्राप्त गर्दैन भने, यो अनौठो हो तपाईंले बच्चालाई तुरुन्त डाक्टरकोमा लैजानु पर्छ
८. योनि बाट सेतो प्रदार्थ आउनु
यो सामान्य हो र केहि गर्न आवश्यक छैन। यसलाई सफा गर्ने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन किनकि यसले चोट पुर्‍याउन सक्छ।
९. योनिबाट रक्तस्राव (अ यो सामान्य हो!)
यद्यपि कहिँबाट पनि रक्तस्राव आमाबाबुको लागि एकदम डरलाग्दो हुन्छ, तर योनीबाट मात्र रक्तस्राव आयो भने यो सामान्य हो। गर्भमा बच्चालाई आमाको हर्मोनको प्रभाव हुन्छ (एस्ट्रोजेन), बच्चा जन्माएपछि अचानक आपूर्ति घट्छ, जसले गर्दा योनी बाट रक्तस्राव हुन्छ। यो महिलामा मासिक रक्तस्राव जस्तै हो, जसमा रगतमा एस्ट्रोजेन हार्मोन अचानक गिरावट भएको खंडमा उनीहरूको मासिक रक्तस्राव हुन्छ। यद्यपि रक्तस्राव महिला बच्चाहरूको सानो अल्पसंख्यकमा देखा पर्दछ, यो सामान्य हो। यो सामान्यतया जन्मेको २ दिन पछि देखा पर्दछ र एक हप्ता सम्म आफै बंद हुन्छ। यदि रक्तस्राव अन्य अंग हरुबाट पनि भइरहेको छ भने, बच्चालाई डाक्टरकोमा लानु पर्छ
पीलिया लगभग ८०% नवजातहरूमा हुन्छ। र यो सामान्यतया हानिरहित हुन्छ यदि आमाको रक्त समूह नेगेटिव वा ओ छैन भने। पीलिया सामान्यतया २ हप्ता भित्रमा कम हुन्छ। यद्यपि म यो सल्लाह दिंछू कि यदि आमाबाबु आफैलाई बच्चा धेरै पहिलों लाग्छ भने कुनै पनि रगत समूह होस, डाक्टरलाई भेट्नु पर्छ। साथै, यदि बच्चाले राम्ररी दूध पिएको छैन वा डाइपरलाई पहेंलो बनाउने पिसाब आउँदछ वा सेतो मल छ भने, बच्चालाई डाक्टरकोमा लैजानु पर्छ।
नाकमा सेतो थोप्ले